Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovaon'ny seranam-piaramanidina • Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao momba ny dia any Eropa • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny dia any Greece • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny dia any Russia • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Greece » Nanome alalana amin'ny fahatongavan'ireo mpizahatany rosiana tsy quota i Gresy
Ireo mpitsidika avy any Rosia izao dia mahazo miditra ao Gresy raha manana taratasy fanamarinana fanaovana vaksiny hiadiana amin'ny coronavirus, na valim-panadinana PCR ratsy, na taratasy fanamarinana misy antibodies COVID-19.
Rehefa tonga any Gresy dia mety angatahina ny mpitsidika avy any Russia hanao fitiliana virus coronavirus
Ny fepetra takiana amin'ny quarantine maharitra fito andro amin'ny fahatongavany koa dia nesorina ho an'ireo mpandeha vaovao
Nanomboka ny 10 Jona dia nitombo ho valo isan-kerinandro ny sidina amin'ny zotra Mosko - Atena
Nanambara ny tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta any Greece fa tamin'ny fanapaha-kevitra noraisin'ny minisitra iray dia efa nitatra hatramin'ny 21 jona ny fahazoan-dàlana ho an'ny fahatongavan'ireo olona mitsidika tsy quota.
Nisy ny fanapahan-kevitra vaovao taorian'ny fanapahan-kevitra teo aloha rehefa nofoanana ny quota fidirana 4,000 XNUMX Rosiana isan-kerinandro. Ny fepetra takiana amin'ny quarantine maharitra fito andro amin'ny fahatongavany koa dia nesorina ho an'ireo mpandeha vaovao.
Ireo mpizahatany rosiana mpizahatany any Gresy dia tsy maintsy mameno ny endrika elektronika mpandeha mpandeha (PLF) ao amin'ny tranonkalan'ny governemanta, manome ny antsipirian'ny fifandraisan'izy ireo any Gresy, iray andro talohan'ny nahatongavany tao amin'ny firenena. Ireo orinasam-pitaterana dia tsy maintsy manamarina ny fisian'izy ireo alohan'ny hidirany amin'ny mpandeha, raha sendra misy fanitsakitsahana dia voatery hamerina ny mpandeha mody any aminy izy ireo amin'ny vidiny manokana.
Rehefa tonga any Gresy dia mety angatahina ny mpitsidika avy any Russia hanao fitiliana virus coronavirus. Ny valiny dia tsy maintsy raisina amin'ny toerana hidirana ao amin'ny firenena. Raha misy valim-panadinana tsara dia tsy maintsy mijanona ho quarantine mandritra ny 10 andro ny mpandeha.
Nanomboka ny 10 Jona dia nitombo ho valo isan-kerinandro ny sidina amin'ny zotra Mosko - Atena. Aeroflot ary Égée Airlines miasa sidina efatra avy.